The Rule of Law (or) Supremacy of Law ( Nov32012 – Sat) – ဒေါက်တာဆလိုင်ငွန်ကျုံလျန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » The Rule of Law (or) Supremacy of Law ( Nov32012 – Sat) – ဒေါက်တာဆလိုင်ငွန်ကျုံလျန်
The Rule of Law (or) Supremacy of Law ( Nov32012 – Sat) – ဒေါက်တာဆလိုင်ငွန်ကျုံလျန်
Posted by kai on Nov 2, 2012 in Events/Fundraise, News |9comments
ဒေါက်တာဆလိုင်းငွန်ကျုံလျန် ကနေ.. The Rule of Law (or) Supremacy of Law အကြောင်းဟောပြောပ်ု့ချပါမယ်တဲ့..။
သွားနားထောင်သူတွေမလုပ်နိုင်တောင်.. အဲဒီ UMFCCI က..တာဝန်ရှိသူတယောက်ယောက်က.. ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး.. ယူတုပေါ်တင်ပေးဖို့ကောင်းတယ်..
ယူအက်စ်ကလူတွေ.. မြန်မာပြည် တော်တော်သွားနေကြတယ်နော…။
ဟုတ်တော့.. နေပါပြီ.. :harr:
သတင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ သူကြီးရေ။
UMFCCI မှာလုပ်တဲ့ ဟောပြောပွဲတွေ အတော်များများက မှတ်တမ်းယူထားပြီး အခွေထွက်ပါတယ်။ အပြင်မှာဝယ်လို့ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ့မှာပဲ ဟောပြောပွဲအပြီး တစ်ပါတ်အတွင်း ရောင်းချပေးပါတယ်။
အရေးကြီးတာက စစ်ပွဲတွေတကယ်ရပ်အောင် နှစ်ဖက်လုံးက ကြိုးပမ်းဘို့ပါဘဲ။
ဆုတောင်းနေရုံ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေလုပ်နေရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။
ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တရားမျှတစွာ စဉ်းစားနိုင်ဘို့လိုပါတယ်။
ယူအက်စ်က တစ်ချို့လည်း စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပြန်ကြတာလို့ကြားတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် တရားမျှတစွာ လုပ်တဲ့ စီးပွားရေးဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာပေါ့ဗျာ။ ဒေါက်တာဆလိုင်းငွန်ကျုံးလျန် ဟောပြောချက်ကိုတော့ သူကြီးအားကိုးနဲ့ မန်းလေးဂေဇက်ကပဲမျှော်နေရုံပဲရှိပါတယ် ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ you tube ပေါ်ပဲတက်မွှေရတော့မှာပဲ။ သူကြီးပြန်ပြီးတော့ မြန်မာ စာနယ်ဇင်းလောကတိုးတက်ရေး အတွက် ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ရင်လည်း အကျိုးရှိမှာသေချာတယ်။ အဆင်ပြေရင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး အကြံပေးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်..
I alsoalawyer ဟာ မနက်ဖြန်မှီသေးတယ် … အားရင်သွားလိုက်မယ် .. ရောက်ဖြစ်ရင်ပြန်ပြောပြမယ်နော်
မမလေး ရှေ့နေဆိုရင် ဦးကြောင်ကို ဂေါင်ဇူး အချုပ်ထောင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်ပါလားကွယ်..။
မတူပီ၊မင်းတပ်၊ကန်ပက်လက် နဲ့ ပလက်ဝဒေသတ၀ိုက်ကိုတာဝန်ယူရတဲ့ ၀န်ထမ်းဘ၀ တာဝန်ကျစဉ်က ပြည်တော်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာဆလိုင်းကို၊ (၁၉၉၀) နဲ့ (၂၀၀၈ ထင်ပါတယ်) အရွေးချယ်ခံ အမတ်ဒေါက်တာမှုထန်းနဲ့အတူတွေဆုံစကားပြောမိပါသေးတယ်။ ဝေးရပ်မြေခြားနေပေမဲ့ဒေသအပေါ်သံယောဇာဉ်အထူးကြီးပြီး၊ ဒေသရဲ့ဖြစ်ပျက်စဉ်မှန်သမျှကို ဒေသခံတွေထက်တောင် ပိုမိုသိနားလည်ပြီး၊ ဗဟုသုတကြီးမားသူတယောက်ဆိုတာကိုအထူးသတိပြုမိပါတယ်။ များစွာသော ချင်းတိုင်းရင်းသားပညာတတ်များ ဟာ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသကနေ ထူးချွန်ထက်မျက်သူတွေ အဖြစ်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပေမဲ့ ၀မ်းနဲစရာကောင်းတာက၊ ခေတ်အဆက်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းတွေမှာ၊ ထိုက်ထိုက်တန်တန်နေရာတွေမှာခန့်အပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာဟာ၊ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါ။